ठेकेदारले समस्या तेर्स्याएपछि प्रधानमन्त्री आफैँ तामाकोसी जाँदै - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
ठेकेदारले समस्या तेर्स्याएपछि प्रधानमन्त्री आफैँ तामाकोसी जाँदै
चैत २७, २०७४ 4247 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अवलोकनमा जान लागेका छन् । उत्पन्न समस्या समाधान सम्बोधन गर्दै समयमै विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्यअनुसार अवलोकनमा जान लागेका हुन् ।
प्रधानमन्त्रीसँगै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन पनि आयोजनास्थल जान लागेका छन् । राष्ट्रिय गौरव ४ सय ५६ मेगावाटको आयोजनाबाट २०७५ चैतसम्म विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
अहिलेसम्म आयोजनाको करिब ९६ प्रतिशत काम पूरा भएको छ । ४ लटमध्ये पहिलो, तेस्रो र चौथोको काम समानान्तररूपमा भइरहेको छ । तर, दोस्रो लट अर्थात् इलेक्ट्रो मेकानिकल काममा भारतीय टेक्सम्याको रेल एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनीले ढिलाई गरिरहेको छ ।
दोस्रो लटको काममा ढिलाइ हुँदा तोकिएको समयमा विद्युत उत्पादन नहुने आशंका बढेको छ । ठेकेदारको ढिलाईले आयोजनामा असर पर्न लागेको जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्री ओली आयोजनास्थल जान लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि ऊर्जा मन्त्री पुनले पनि समयमै आयोजनाबाट विद्युत उत्पादन गर्न आफूले पहल गर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीको सहजीकरण तथा दबाबबाट पनि आयोजना समयभित्र ल्याउन सकिने आयोजनाका उच्च अधिकारीको विश्वास छ ।
आयोजनामा ७६ मेगावाटका ६ वटा युनिट छन् । २०७५ पुससम्म पहिलो युनिटबाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । यस्तै, चैतसम्म ६ वटै युनिटबाट उत्पादन गर्ने योजना छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ३० मेगावाटको चमेलिया, १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोलगायत आयोजना निर्माणमा दशकौं लगाउने गरेको छ । ११ वर्षमा चमेलियाबाट विद्युत उत्पादन भयो । कुलेखानी कहिले पूरा हुन्छ भन्ने यकिन छैन । विगतका गलत उदाहरण तामाकोसीमा नदोरिन नदिने गरी आफूले काम गर्ने मन्त्री पुनले बताउँदै आएका छन् ।